ဘဝမှတ်တိုင်: Hardware လေ့ လာ သူအတွက် အခြေခံ
ခုမှ Hardware လေ့ လာ သူအတွက် အခြေခံ ကိုအကြမ်း ရေး ထားတာ ဖြစ်လို့ မပြည့်စုံပါဘူး ...
အမှား ပါ ရင် ဆရာ တွေ ပြင်ပေး ကြပါ ခင်ဗျာ ...
မိုဘိုင်းဖုန်း တွင် ပြစ်ချက် ၃မျိုး ရှိပါတယ် :
1. Hardware ပြစ်ချက်
2. Software ပြစ်ချက်
3. Settings ပြစ်ချက်
1. Hardware ပြစ်ချက် ကို hardware ဖြင့် သာ ပြုပြင် နိုင်မည် ။ဥပမာ -ပစ္စည်းလဲ ခြင်း၊ လမ်းကြောင်းလိုက်ခြင်း ၊ic လဲ, ခြင်း ,စသဖြင့်
2. Software ပြစ်ချက် က OS (Operating System) ပျက် ရင် ဖြစ် နိုင်ပါတယ် ။ ဒီပြစ် ချက်ကို တော့ Firmware ပြန်တင် ခြင်း ဖြင့်ကောင်း နိုင်ပါတယ် ။ Box ဖြင့် ရေးခြင်း က ကောင်း နိုင်ခြေ ပို မို ရှိပါတယ် ။
3. Settings ရဲ့ ပြစ် ချက် ဆို တာက တော့ settings ကို မှား ချိန် မိလို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ပထမ ဆုံး တစ်ခု ခြင်း စီ လိုက်ပြင် ကြည့်ပါ ။ အဲ့လို ချိန် လို့ မှ မရသေးရင် settings ထဲ က Factory reset ကို ချပေး လိုက်ပါ။
ဖုန်းတစ်လုံး စကိုင် မယ် ဆိုရင် % ခွဲ ကြည့် လိုက် ပါ ။ဘယ်အပိုင်း က ဖြစ် နိုင် မလဲ ဆိုတာ ကို ။ ဥပမာ - ရုပ်မထွက် ဘူး (display မလာဘူး) ဆိုရင် 90% Hardware လို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။ကျန် 10% ကတော့ software အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေပါ ။
ကျန်တာတွေ လဲ အဲ့ လို ခွဲ ခြား ပြီး % များ ရင် များသလို software ပိုင်းအရင် ကိုင်ရတာ လဲ ရှိပါတယ် ။
မိုဘိုင်းဖုန်း မှာ အဖြစ် များ သော ပြစ်ချက် များ :
1. Mobile Phone Dead
2. Insert Sim Card Problem
3. Hanging Problem
4. Network Problem
5. Mic Problem
6. Ringer Problem
7. Ear Speaker Problem
8. Vibrator Problem
9. Display Problem
10. Mobile Restart/ Switch Off Automatically Problem
11. Call Cut Off Problem
12. Charging Problem
13. Keypad Problem
14. Sim Lock/ Mobile Lock Mobile
15. Contact Service/ Contact Retailer/ Contact Manufacturer
16. Battery Discharge Problem
17. Gallery Not Opening Problem
18. Camera Problem
19. FM Radio
20. LED Problem
21. Memory Card Problem
22. Bluetooth Problem
1. ပါဝါ မလာတဲ့ ဖုန်း ကို ပြု ပြင်ခြင်း
ဖုန်း ရဲ့ ပါဝါ ဖွင့်တဲ့ ခလုပ် နိုပ်တဲ့ အခါ ပါဝါ တက် မလာ တဲ့ ဖုန်း ကို ဆိုလိုပါတယ် ။
ဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်း အများ ကြီး ရှိပါတယ် ....
1. ရေ၀င် ခြင်း
2. ပြုတ်ကျ ခြင်း
3. အချိန် ကြာမြင့် စွာ အသုံးမပြု ဘဲ ထားခြင်း
4. အကြောင့် အရင်း တစ်စုံတစ်ရာ
အသုံးပြု သူ ကို မေး ပါ ။ ရေ၀င် လား သို့ ပြုတ်ကျ လား ။
ပြီး ရင် Power supply နဲ့ ဖွင့် ကြည့် ပါ ။ပါဝါ အဆုံးထိ တက်တယ် ဆို လျှင်
(1)ဓာတ်ခဲ ကိုအရင် စစ်ပါ ။ အနည်းဆုံး 3.7 ဗို့ရှိ ရပါမယ် ။
(2) ဖုန်း ရဲ့ ဓာတ်ခဲ အထိုင် ငုတ် ကို စစ်ပါ ။
တကယ် လို့ Power supply နဲ့ မတက် ဘူး ဆိုရင် ပါဝါ ဖွင့် ပါ က အန်ပီယာ ဘယ်လောက် တက်လဲ ကြည့် ရပါမယ် ။(မှတ်ချက် - အချို့ ဖုန်း PS နဲ့ မပွင့် ပါ)
၁။ အန်ပီယာ လုံးဝ မတက်ပါ က ပါဝါ ခလုပ် နှင့် ဖုန်း ရဲ့ ဓာတ်ခဲ အထိုင် ငုတ် ကို စစ်ရပါမယ် ။
၂။ ပါဝါ မဖွင့် ခင် အန်ပီယာ တက်နေ ပါ က ic တွေ ကို စစ် ဆေး ရပါမယ် ။ရေ၀င် နေ ရင် ဖြစ် တက်ပါတယ် ။
၃။ ပါဝါ ဖွင့် တဲ့ ချိန် တက်ပြီး ပြန်ကျ သွား ရင် ic မှုတ်ထား ပြီး သား ဖြစ် နိုင်ပါတယ် ။
၄။ ချိတ် လိုက်တာ နဲ့ အသံ မည် နေ ရင် ရှော့ ကျ နေတာ ပါ ။ ရှော့ ကျ နေ ရင် Power supply မှဗို့ ကို0ထိ ချ ပြီး ဖြည်းဖြည်း ခြင်း တင် ပါ ။ အန်ပီယာ တက် လာပါမယ် များ သွား ရင် အသံ ပြန် မည်လာပါမယ် ။မမြည် အောင် ထားပြီး ပူလာ တဲ့ ic ဘေးနား ကို ရှော့ ကျမကျ စစ်ပါ ။အကုန်ကောင်း နေရင် ic လဲကြည့်ပါ။ capacitors နဲ့ diode က ရှော့ ကျနေ ရင် တော့ 0.8လောက် ရောက်ရင် အသံမည်တက်ပါတယ်။
ရေ၀င် လို့ ရှော့ ကျနေ မယ် ဆိုရင် circuitကို ပေါင်း စက် နဲ့ ပေါင်း လိုက်ပါ (display, camera, အစ ရှိတာတွေ စက်နဲ့ မပေါင်း ခင် အရင်ဖြုတ်ရပါမယ် )
circuit ကို သွားတိုက်တံ နှင့် ဆေးပြီး hair dryer နဲ့ အခြောက်ခံ ပါ။ တကယ် လို့ ပေါင်းပြီး တာတောင် ရှော့ ဖြစ်သေးရင် ic,capaicitor,diode သို့မဟုတ် circuit မှာ ရှော့ ရှိနေပါပြီ ။တကယ်လို့ ic မှာ ရှော့ ရှိမရှိ သိချင် ရင် Battery ကိုတက်ပါ
(Pw Supply နဲ့ လဲရပါတယ် ) ၁မိနစ် လောက် တက်ထားပါ ပြီးရင် ပူနေတဲ့ IC ကို ရှာ ပါ ။တွေ့ ပြီဆိုရင် အပူပေးပါ၊ တုန် ကြည့် ပါ ၊ မရရင် လဲ လိုက်ပါ. circuit မှာ ရှော့ ကျနေ ရင်တော့ ပေါင်းစက် ဖြင့် ပေါင်းရုံ နဲ့ ကောင်း နိုင်ပါတယ် ။
Note - circuit က သုံး လွာ ရှိပါတယ် ။အလယ် အလွှာ မှာ ဖြစ်ရင် တော့ မရ နိုင်ပါဘူး ။
Note -အားသွင်း ကြိုး တက်ကြည့် ပါ ။တကယ် လို့ display မှာ အားသွင်း နေတဲ့ ပုံ ပြနေရင် ပါဝါ ခလုပ် သို့ မဟုတ် software ပြသနာ ပါပဲ ။
Software ရေးကြည့်ပါ ။.
2. SIM ကဒ် ပြသနာ ဖြေရှင်းခြင်း
SIM ကဒ် ထည့် ပြီး သော် လည်း ‘Insert sim card’ or 'insert uim card' or 'offline mode' ဖြစ် နေရင် sim card ပြစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ် ။
(1) Sim Card အထိုင် ကို တိုင်းကြည့် ပါ ။
(2) Sim Card အထိုင် ကို ဆေးကြည့် ပါ ။
(3) ခဲ Gun နဲ့ အထိုင် တွေ ကို သေချာ ပြန် တို့ ပါ ။
(4) sim card ကို လဲ စစ်ကြည့် ပါ ။တခြား ကဒ်ထည့်စမ်းပါ ။
(5) Sim IC ကို လေမှုတ် Gun နဲ့ အပူ ပေးကြည့် ပါ ။
(6) sim IC ကို လဲကြည့် ပါ ။
(7) လမ်းကြောင်း ကျော် ကြည့် ပါ ။
(8) တကယ် လို့ Power IC or UEM IC က ဖြစ်ခဲ့ တယ်ဆို အပူပေး/တုန်/လဲ ကြည့်ပါ ။
3။ ဟန်း တဲ့ ပြသနာ ဖြေရှင်း ခြင်း
အများ စုတော့ Software ပြသနာ ဖြစ်တာ များပါတယ် ။Hardware ကြောင့် ဆို ရင် တော့ CPU ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။CPU speed ကျရင်ဖြစ်တက်ပါတယ်။
4။ Network ပြသနာ ရှင်း ခြင်း
၁။ ကဒ် ဖတ် ရဲ့ သားနဲ့ လိုင်း မတက် ခြင်း
၂။ လိုင်းနည်း ခြင်း
၃။ အထွက် ပဲ ရခြင်း
၄။ အ၀င် ပဲ ရခြင်း စသည် ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိ ပါတယ် ။
၁။ ကဒ် ဖက် လိုင်း မတက် ခြင်း
Software ကြောင့် ဖြစ်တက် သည့် အတွက် အရင် ဆုံး Firmware ပြန်ရေး ကြည့် ပါ ။
*#06# နိုပ် ကြည့် ပါ နံပတ် ၁၅ လုံး ပေါ် မလာ ရင် လဲ လိုင်း မတက်ပါဘူး ။ Baseband ပျောက် ရင် လဲ လိုင်းမတက် နိုင်ပါဘူး ။
နောက်ထက် က Pa or Rf ic ပျက် ရင် လဲ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။
Network ကြီး အထိုင် တွေ စစ် ကြည့် ပါ ။လွတ်နေရင် ဖြစ်တက်ပါတယ် ။ မရရင် Network switch ကို ကျော် ကြည့် ပါ ။မရ ရင် Ic တွေ စစ် ကြည့် ရပါမယ် ။
၃။ အထွက် ပဲ ရတာ က တော့ ခေါ် ရင် ဘာ ပြော လဲ ပေါ်မူတည် ပါတယ် ။ မအား ဘူး ဆို ရင် တော့ Black list ကြောင့် ဖြစ် နိုင်ပါတယ် ။ firmware ရေးလိုက် ရင် ကောင်း ပါတယ် ။ စက်ပိတ် ထားတယ် ဆို ရင် တခြား ကဒ် ကို အဲ့ ဖုန်း ထဲ ထည့် ပါ စမ်း ပါ ။
။ အ၀င် ရပြီ ဆို ရင် တော့ ကဒ် ကြောင့် ဖြစ် တာပါ ။ မရရင် တော့ Firmware ရေးကြည့် လိုက်ပါ ။
၄။ အ၀င် ပဲ ရရင် လိုင်းနည်း တာ လား စစ် ကြည့် ပါ ။ တခြား ကဒ် ကို အဲ့ ဖုန်း ထဲ ထည့် ပါ စမ်း ပါ ။
အထွက် ရပြီ ဆို ရင် တော့ ကဒ် ကြောင့် ဖြစ် တာပါ ။ မရရင် တော့ Firmware ရေးကြည့် လိုက်ပါ ။
၅။ Mic ပြသနာ
Mic ရမရ အရင် ဆုံး Recorder နဲ့ စမ်း ကြည့် ပါ ။ ရ ရင် Firmware ရေးလိုက်ပါ ။ မရ ရင် တော့ Hardware ပိုင်းစစ် ကြည့် ပါ ။ အကုန် ဖြုတ်ပြီး ရင် Mic အထိုင် လိုင်းကြောင်း တိုင်း ပါ ။ ရှိ ရင် Mic ကို တိုင်း ကြည့် ပါ လဲ ကြည့် ပါ ။
လမ်းကြောင်း မရှိ ရင် တော့ လမ်း ကြောင်း လိုက် ရပါမယ် ။
၆။ Ring စပီကာ အသံ မထွက် ခြင်း
Ring စပီကာ သံ မထွက် ပါ က အရင် ဆုံး သီချင်း ဖွင့် ကြည့် ပါ ။ရပါက silent mode ဖြစ် နေ ရင် သို့ အသံ တိုး နေရင် ဖြစ်တက်ပါတယ် ။ မရ ပါ က အကုန် ဖြုတ်ပြီး ရင် စပီကာ အထိုင် လိုင်းကြောင်း တိုင်း ပါ ။ ရှိ ရင် စပီကာ ကို တိုင်း ကြည့် ပါ လဲ ကြည့် ပါ ။
လမ်းကြောင်း မရှိ ရင် တော့ လမ်း ကြောင်း လိုက် ရပါမယ် ။ Resistor ၊ Coil နဲ့ capacitor စတာတွေ ကို စစ် ကြည့် ရပါမယ် ။ ရှော့ ကျ နေရင် တော့ Fitter capacitor ကို စစ် ကြည့် ရပါမယ် ။ အကုန် မှန် ရင်တော့ PW ic ကို အပူပေး တုန် ကြည့် လဲကြည့် ရပါမယ် ။
၇.။ နားစပီ ကာ
ဖုန်း ခေါ် စမ်း ကြည့် ပါ ။ ခေါ် နေချိန် မှာ အသံ ချဲ့ ကြည့် ပါ ။တိုးနေ ရင် လဲ လုံးဝ မကြား ရတာ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။ မရ ပါ က အကုန် ဖြုတ်ပြီး ရင် စပီကာ အထိုင် လိုင်းကြောင်း တိုင်း ပါ ။ ရှိ ရင် စပီကာ ကို တိုင်း ကြည့် ပါ လဲ ကြည့် ပါ ။
လမ်းကြောင်း မရှိ ရင် တော့ လမ်း ကြောင်း လိုက် ရပါမယ် ။ Resistor ၊ Coil နဲ့ capacitor စတာတွေ ကို စစ် ကြည့် ရပါမယ် ။ အကုန် မှန် ရင်တော့ PW ic ကို အပူပေး တုန် ကြည့် လဲကြည့် ရပါမယ် ။ ရှော့ ကျ နေရင် တော့ Fitter capacitor ကို စစ် ကြည့် ရပါမယ် ။
လက်ညောင်းသွား ပြီ ကျန်တာတွေတော့ ဆရာတွေ ဆက်ရေးပါလိမ့် မယ် ...
အကို Soe Myat Thu ၊ အကို Maung Naing ၊ အကို Nay La ၊ အကို Aung Phyoe
ကို Ko Aikon Htut ၊ Ko Htut နှင့် တခြား ဆရာ များ ....
— with Ko Soe Myat Thu and2others.
— with Ko Soe Myat Thu and Nay La.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/18/2014 09:27:00 am
စာအမျိုးအစား နည်းပညာ, ဗဟုသုတ
yan paing 17 February 2015 at 18:46
aung winhtay 18 August 2015 at 00:44
Min Thein Aung3September 2015 at 09:45
လူလွန်လှိုင်း 10 September 2015 at 00:35
အရမ်းကောင်းပါတယ် မီတာတိုင်းနည်း ပါဝါစပလိုင်းသုံးနည်းတွေကိုပါမျှော်နေပါတယ်ဆရာ
Nicky Lin 28 November 2015 at 07:59
ကျေးဇူးပါ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါ စေ
Unknown 20 December 2015 at 19:41
Unknown9January 2016 at 21:25
very good sar
saw ae 25 January 2016 at 16:29
koko sonay 16 March 2016 at 03:24
ဆရာ samsung sch-i909 ကို odin နဲ့ rootလုပ်ရင်းစက်သေနေပါတယ် S/D ထင်တယ် ဆရာ အကြံပေးပါအုန်း
muse mobile service
huskarlay Lay2June 2016 at 03:11
Mung Ttp 26 June 2016 at 09:58
Mung Ttp 26 June 2016 at 10:06
G730-u00 firmware ဘယ်​လိုတင်​မလဲ ဆရာ sd card နဲလဲမရဘူ.
LG ms769 security erroronly ဘယ်​လိုလုပ်​မလဲ ဆရာ ကူညီပါအုံး
Mung Ttp 26 June 2016 at 10:00
Unknown 29 October 2016 at 21:02
IC အထိုင်​​လေး​တွေ​လောင်း​နေ​တော့ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ ခင်​များ...ညီ​လေး ဆိုင်​သွား​တော့လဲ ပြင်​လို့မရ​တော့ဘူး..​ပြောပါတယ်​.ကူညီပါအုံး..အကို..
Gplay mini ရေဝင် လက်ပွတ်မရကြိုးကျော်နည်း
Gplay mini ရေဝင် လက်ပွတ်မရတာလေး စစ်ကြည့်လိုက်တော့ vdd2.8 လေးပျောက်နေတယ် pm ic နားက2.8 နဲ့ jumper လုပ်ကြည့်တယ် မရဘူး vdd 2.8 Sda 1.8 Scl...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.................... Ha uwei ဖုန်းများအတွက် Root လုပ်စရာမလို ပဲမြန်မာစာ ထည့်သွင်း နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ... G-730 လို မြန်မာ...
ဘောလုံးဂိမ်း ချစ်သူများအတွက် PES 2016 Pro Apk +Data (Andriod Game)
ဘောလုံးဂိမ်း ချစ်သူများအတွက် PES 2016 အရည်အရည် ကောင်းလွန်တဲ့ HD ဂိမ်း လူကြိုက်များတဲ့ PES 2016 ဂိမ်းလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ...
မြန်မာလို PDF နည်းပညာစာအုပ်များ ၁၀၃ အုပ်။
မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ ၁၀၃ အုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကို တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်ပါ... pyayblogger မှာတွေ့လို့ ပြန် Share လ...
ခုနစ်လက်မ မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ထားသည့် Samsung Galaxy...
Security – Premier v3.6.0.6609 for android(latest ...
Automatic Call Recorder Pro V_3.69 apk.
✏ S4 Clone GT-I9500 MTK 6577 Firmware တင်နည်း✏
အကြမ်းခံသည့် Samsung Galaxy S5 Active ကို ရောင်းပြ...
Google Play Store မှာ “No Connection – Retry” ဆိုတ...
★★ VideoShow Pro - Video Editor v2.7.0- Android ★★...
2K Display ရုပ်ထွက်နဲ့ အထင်ကြီးစရာ LG G3
ဆရာမဒေါ်ထားထားလွင် ရဲ့ Android Application ရေးသားနည...
♪ Sony & Huawei တို့ရဲ့ Firmware များကို Click တစ်...
★Adm Pro v3.5.5(android)★
ezPDF Reader Multimedia PDF V2.5.4.0 for android(l...
♪ ဟန်းဆက်ပေါင်းများစွာကို Root လုပ်နိုင်တဲ့ V Root...
♪ တရုတ်ကုမ္ပဏီ Xiaomi ရဲ့ iPad Mini အလား ထင်မှတ်မှာ...
Smart Booster Pro v3.4.140527 for android(latest v...
Color Splash Effect Pro Version1.5.8 APK for andro...
✏ဂျီ​မေးလ်​အ​ကောင့်​န်​ကို အလွယ်တကူ ဟက် (ခိုး)နည်း...
✏Olive Pdf Tools v1.0(Android)✏
✔Friend Caster Pro for Facebook v5.4.5 Apk ✔
Multitasking Pro v1.08 APK for android(latest vers...
Memory Reboot PRO v2.2.1 Apk Full App
မြန်မာသီချင်း သီးသန့်ယူရန်အတွက် သင့်တော်သော Websit...
Manchester News Apk
Cymera Social Photo Editing V2.0.4.apk - 28 MB
Mobile Counter Pro - 3G, WIFI V 3.4 APK for androi...
Facebook for Android V11.0.0.0.13 for android(late...
IOS 7.1.1 အတွက်မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း
Jailbreak 7.1.1 Iphone 4/ 4s GeekSn0w ထက်updateေ...
2014 ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကြိုက်အများဆုံး And...
SM N900 Full Firmware 4.4.2
SONY XPERIA C ကို Firmware တင်ခြင်း(Flash Tool နဲ့...
Linux OS အကြောင်းရှင်းလင်းချက် မြန်မာဘာသာပြန် (Ebo...
Easy Uninstaller Pro - Clean v2.2.8 for android(la...
ဘိလိယက်ဝါသနာရှင်များအတွက် - Pool Break Pro - 3D Bi...
✏ Yandex Mail Account Register ပြုလုပ်​နည်းနှင့်​...
ရွှေရောင် lenovo Warrior s8 အချက်အလက်များထွက်ပေါ်လာ
Phone Memory ကနေ SD card ထဲကို app တွေအလွယ်တကူပြေ...
နောက်ခံ Backgroundလေးကို 3D Parallax Background V ...
✏Phone Spy v1.21 App(For Android)✏
2014Brazill World Up Theme Song
Xperia Z2 D6503 (4.4.2 ) 17.1.A.2.69 CWM Root !
ဒီဇိုင်းနဲ့ selfie ရိုက်ကူးမှု အသားပေးHuawei Ascen...
DTAC Joey Turbo 4.0 ZTE V765M Firmware
သင့် Viber ကို အချိန်ဇယားဖြင့် လိုသလို Offline လုပ...
Mobile AntiVirus Security Pro V 4.0.1.2 APK for an...
HTC Firmware အကြောင်းသိကောင်းရာ အချက်လေးများ
How to root sony xperia Z2 android 4.4.2 kitkat bu...
Android APP တွေကို PC မှာသုံးရာမှာ Bluestackထက်ပို...
Phone IC အကြောင်းသိကောင်းစရာလေးများ...
Network ပေါ်က Windows Installation လုပ်ကြည့်မယ်ဗျာ။...
Electronic Droid တွေ အကြောင်းကိုလေ့လာချင်သော မိတ်ေ...
Material Estimator Calculator v1.0.6 Android
Android ဖုန်းမှာ WinRar APK လေးသုံးချင်သူများအတွက်...
ဖုန်းရောင်းမည့်စနစ်တွင် အသုံးပြုသူ၏ အချက်အလက်ရယူမှု...
အင်တာနက်အသုံးပြုသည့် ကျသင့်ငွေကို လူအများအသုံးပြုန...
မြန်မာစာစနစ် Unicode တစ်မျိုးတည်းသာ အသုံးပြုရန် စီ...
HUAWEI OFFICIAL FIRMWAREBy Aung BoBolwin on Saturd...
GarageBand for iPhone/iPad/iPod Touch အတွက် Full v...
★★ 7-Data Android Recovery Enterprise 1.1 Multilin...
ဘေးအန္တရယ် ကြုံတဲ့အခါ ကိုယ်ရဲ့ အရင်းအနီးဆုံး အဆက်အသ...
Vault_Premium_v 5.0.04.22 APK လေးလိုချင်သူမျုားအတွ...
tinyCam Monitor PRO for IP Cam V5.4.1.apk for andr...
Firmware ဆိုတာ ဘာလဲ
FaceBook Account ဖွင့်နည်း
lock Screen မှာ မြန်မာလို ရက်စွဲ၊နာရီ ဖော်ပြပေးမယ်...
Facebook က သင့် အကောင့်ကို Lock ချခြင်း Block ရခြင...
ခလုတ်တစ်ချက်ထဲ့နဲ့ Android ဖုန်းများကို Recovery M...
Cityscape – Start Theme Version : 3.0 APK ( All An...
Dialapp Kitkat Dialer V2.42.apk
တရုတ်ဖုန်းများအား Root လုပ်ခြင်း
Feature အသစ်များထပ်မံပါဝင်လာတဲ့ - Viber 4.3.3.67 U...
Samsung Galaxy S5 ကို Root လုပ်နည်း
One Click Root V2
Facebook 11. 0. 0.0.4( For Android )
Aptoide [App ပေါင်းစုံကို App Store စုံမှ ဒေါင်းယူ...
ကြိုတင်မှာယူမှု ၁၅သန်းပြည့်သွားတဲ့ Xiaomi Redmi Not...
Galaxy Note 8.0 GT-N5100 Android 4.4.2 Firmware Do...
Windows Xp, 7, Vista (Double Your Internet Speed F...
Android ဖုန်းသုံးသူတွေအတွက် APKShare
Android ဖုန်းထဲမှာတင်3D Animation လုပ်မယ်..
phone spy APK
ဖုန်းလိုင်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာ နေရသူတွေအတွက် signal ...
internet ကနေ နိုင်ငံတကာက မည်သည့်ဖုန်းမဆို free ခေါ်...
Nokia N9 Myanmar Font & Myanmar Keyboard
Photo Editor V3.4.2 (Unlocked) Apk for android(lat...
Easy Battery Saver v3.3.6 Apk for android(latest v...
Hexamob Recovery PRO Undelete v5.01 Apk
Telenor မှ အောက်တိုဘာလတွင် ဆင်းမ်ကတ် သန်း (၃၀) ရော...
C8816 Root, Sim Invalid (Network Unlock) and Myanm...
Samsung က မိုဘိုင်း App များ အခမဲ့ရယူနိုင်ရန် ရန်က...
Wifi & 3G Sleep apk for Android